လီဗာပူးကြယ်ပွင့်ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ သူ့ကို စိတ်အနှောက်အယှက် အပေးနိုင်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ အီဗရာ - xyznews.co
လီဗာပူးကြယ်ပွင့်ဟာ ကစားသမားဘ၀မှာ သူ့ကို စိတ်အနှောက်အယှက် အပေးနိုင်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ၀န်ခံလိုက်တဲ့ အီဗရာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဘယ်နောက်ခံလူဟောင်း ပက်ထရစ်အီဗရာက လီဗာပူး စတား ဂျိမ်းမီနာဟာ သူ့ကို စိတ်အနှောက်အယှက် အပေးနိုင်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၅ ကြိမ် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဂန္တ၀င်ဟာ သရဲနီ ကစားသမား ဘ၀ ၈ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြိုင်ဘက်ကောင်း များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ရပါတယ်။
မကြာသေးမီက အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ အီဗရာကို မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘ၀တုန်းက အကောင်းဆုံးနဲ့ အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဘက် ဘယ်သူ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၄၀ အရွယ် အီဗရာက သူဟာ ဘယ်ကစားသမားကိုမှ ရင်ဆိုင် ကစားရတာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးဆို့ ၀န်ခံလိုက်ပေမယ့် နယူးကာဆယ် ၊ အက်စတွန်ဗီလာ ၊ မန်စီးတီး နဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သူ ဂျိမ်းမီနာနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့တဲ့ အခါတိုင်း စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မိတယ်လို့ ထုတ်ဖော် သွားခဲ့ပါတယ်။
အီဗရာက “ကျွန်တော် ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဟာ ကျွန်တော် ပက်ထရစ် ကိုယ်တိုင် ပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဆိုးဆုံး ရန်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရင်ဆိုင် ကစားရတာ မကြောက်လို့ ပါပဲ။ ကျွန်တော် ပုံစံကောင်း မပြသနိုင်တဲ့ နေ့မျိုးတွေမှာ ဘယ်သူမဆို ကျွန်တော့်ကို အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမား ဘ၀ ကာလအများစုမှာ ကျွန်တော်ဟာ ပုံစံကောင်း ရခဲ့တဲ့ နေ့တွေ များခဲ့ပါတယ်။
အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဘက်လား? အခက်ခဲဆုံး ပြိုင်ဘက် ဆိုတာ ကျွန်တော့် အတွက် မရှိပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် အပေးနိုင်ဆုံး ကစားသမား ကတော့ ဂျိမ်းမီနာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို နာမည်ကြီး ကစားသမား တစ်ဦးဦး နာမည်ကို ပြောလိမ့်မယ်လို့ အမြဲ မျှော်လင့် နေကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျိမ်းမီနာကို ကျွန်တော် ရွေးချယ်တဲ့ အကြောင်းရင်း ကတော့ သူဟာ အမြဲတမ်း ကျွန်တော့်ထက် ခံစစ်ကို ပိုမို အားစိုက် ကစားလေ့ ရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါ ပံ့ပိုး ကစားရတာကို နှစ်သက်တဲ့ နောက်ခံလူမျိုးပါ။ သူဟာ ကျွန်တော် သွားတဲ့ နေရာတိုင်းကို လိုက်နေတဲ့ အတွက် တအားကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်တော် အ်ိမ်သာ သွားမယ် ဆိုရင်တောင် သူဟာ ကျွန်တော့်နောက်ကို ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာမယ့် ပုံစံပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို ကွင်းထဲမှာ စိတ်အနှောက်အယှက် အပေးနိုင်ဆုံး ကစားသမားဟာ ဂျိမ်းမီနာ လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကို Idol လုပ်ပြီး ကြီးပျင်းလာခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း အီဗရာက “ဘောလုံးလောကမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိုင်ဒေါ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ရိုမာရီယိုကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ Idol ဟာ အမေပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြောတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတယ် ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ ဘောလုံး ကစားရတာကို နှစ်သက်တာကြောင့် ဘောလုံး ကစားခဲ့တာပါ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous Article ပေါ်တူဂီ အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလား Play-off ကစားရတာဟာ ရိုနယ်ဒို အတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိစေတာလဲ ?
Next Article လူငယ်တွေ အပေါ် အရမ်းကြီး မှီခိုအားထား မနေဖို့ အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ် ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ဆက်ဂ်နာ